03/01/13 ~ Myanmar Forward
ဟံသာဝတီ ကားပွဲစားဝင်း အခြေအနေ
Posted by drmyochit Friday, March 01, 2013, under ပြည်တွင်းသတင်းများ | No comments
ဟံသာဝတီ ယာဉ်ရောင်းဝယ်ရေးစခန်းကို ရန်ကုန်မြို့ တော် စည်ပင် သာယာရေး ကော်မ တီက မတ်လ ၁ ရက်နေ့တွင် ချိတ်ပိတ်၍ ကား အ၀င်အ ထွက် မပြုလုပ်နိုင်ရန် ဂိတ်ပေါက် တံခါးများ ကို ရဲများနှင့် စည်ပင်ဝန်ထမ်းများက အစောင့် ချ ပိတ်ဆို့လိုက်သည်။
ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီက ဟံသာ ၀တီ ယာဉ်ရောင်းဝယ်ရေးစခန်းကို ဖေဖော် ၀ါရီလ ၂၈ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား၍ သီရိမင်္ဂလာဈေးဟောင်းသို့ ယာယီပြောင်းရွှေ့ပေးရန် ညွှန်ကြားချက် ထုတ်ပြန် ထားသည်။
မလက်တိုကျေးရွာ အုပ်စုအတွင်း ထုတ်ပြန်ထားသည့် ပုဒ်မ ၁၄၄ နှင့် ကျန်ရှိနေသည့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များအား ဒေသတည်ငြိမ်မှုအပေါ် မူတည်ပြီး ၄၈ နာရီအတွင်း ရုတ်သိမ်းမည်
ဧရာဝတီတိုင်း ဒေသကြီး မအူပင်မြို့နယ် မလက် တိုကျေးရွာ အုပ်စုအတွင်း ထုတ်ပြန် ထားသည့် ပုဒ်မ ၁၄၄ နှင့် ကျန်ရှိနေသည့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များအား ဒေသ တည်ငြိမ်မှုအပေါ် မူတည်ပြီး လာမည့် ၄၈ နာရီ အတွင်း ရုတ်သိမ်းသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ဧရာဝ တီတိုင်း ဒေသကြီး ဒုတိယတိုင်းဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့ မှူး ဦးထွန်းမင်းက မတ်လ ၁ ရက် မွန်းလွဲပိုင်း ကပြောကြားခဲ့သည်။
ဒေသခံများ၏ လယ်ယာမြေ ပြန်လည်ရရှိရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၆ ရက်နေ့ မွန်းလွဲ ၁ နာရီက ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ အမိန့်ဖြင့် ပုဒ်မ ၁၄၄ ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး ယင်းညတွင် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် ဒေသခံများ အကြား ပဋိပက္ခ ဖြစ်ပွားခဲ့ရာ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် ၁ ဦး သေဆုံးခဲ့ပြီး ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် ၂၆ ဦးဒေသခံ ၁၅ ဦး ဒဏ်ရာများ ရရှိခဲ့ကြသည်။
လဖြူဂျီလုပ်စားတော်လှန်ရေး၊ သောက်တလွဲရဲရဲတောက်နဲ့ အော်စလိုရွှေပန်းများ
Posted by drmyochit Friday, March 01, 2013, under ဆောင်းပါး | No comments
အော်စလို သူရဲကောင်းကြီးတွေ ဆတ်ဆတ်ခါအောင် နာသွားရတဲ့ မြန်မာပြည် သူတွေရဲ့ မေတ္တာပို့ သမှု.....ကြောင့် တော်လှန်ရေးသမားကြီးခင်ဗျာမလဲ .. နုတ်တင်ပြီး ရှင်းလင်းချက် ထုတ်ထားပါတယ်....
ဒီမိုကရေစီလက်ချာပေးသွားတဲ့ လဖြူဂျီလုပ်စား တော်လှန်ရေး သမားကြီးကို မေးချင်တာက ဒါလားဟဲ့ ဒီမိုကရေစီ ဆိုတာပါပဲဒီ မိုကရေစီ ဗားရှင်းအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်......ကားလ်မတ်စ်တို့ အိန်ဂျယ် တို့ရဲ့ ကွန်မြူ နစ် မှာ လည်း ဆိုရှယ်ဒီမို ကေ ရစီ ရှိတာပဲ.....စလုံးမှာလဲ စလုံး ဒီမိုကရေစီရှိသလို အမေရိကန်မှာလဲ အမေရိ ကန် ဒီမိုကရေစီ ရှိတာပဲ......
Posted by drmyochit Friday, March 01, 2013, under နိုင်ငံတကာသတင်းများ | No comments
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှတရားရုံးဆုံးဖြတ်ချက်အား ဆန္ဒပြအဓိကရုဏ်း အနည်းဆုံး ၄၂ ဦးသေဆုံး
အစ္စလာမ်မစ် နိုင်ငံရေး ပါတီ ခေါင်းဆောင် တစ်ဦးအား စစ်ရာဇ ဝတ်မှုများ အတွက် သေစားသေစေ အမိန့် ချမှတ်လိုက်ပြီးနောက် မကျေ နပ် သူများက အုံကြွခဲ့ရာမှ ပဋိပက္ခများ ကြီးထွားလာခြင်း ဖြစ် သည်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံတွင် တရားရုံး ဆုံးဖြတ်ချက် တစ်ခုအပေါ် မကျေနပ်သဖြင့် လူအများ အဓိကရုဏ်း သောင်းကျန်းကြရာ အနည်း ဆုံး (၄၂)ဦး သေဆုံးသွားကြောင်း သိရှိရသည်။ အစ္စလာမ်မစ် နိုင်ငံရေး ပါတီ ခေါင်းဆောင် တစ်ဦးအား စစ်ရာဇဝတ်မှုများအတွက် သေစား သေစေ အမိန့် ချမှတ်လိုက်ပြီးနောက် မကျေနပ်သူများက အုံကြွခဲ့ရာမှ ပဋိပက္ခများ ကြီးထွားလာခြင်း ဖြစ်သည်။
အသက်မပြည့်အမျိုးသမီးငယ်အား အဓမ္မပြုကျင့်ရန် ကြံစည်မှု အလုံ၌ဖြစ်ပွား
Posted by drmyochit Friday, March 01, 2013, under မှုခင်း | No comments
ဖေဖော်ဝါရီလ(၂၆)ရက်နေ့၊ နံနက် ၇ နာရီ ခွဲခန့် တွင် အလုံမြို့နယ် ဆင်စွယ်လမ်း ၌ အသက် (၁၁)နှစ် ၅လ အရွယ် အလယ်တန်း ကျောင်း သူလေး အား အဓမ္မကျင့်ရန် ကြိုးစားအားထုတ်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ သည်ဟု သိရှိရ သည်။
အခင်းဖြစ်ပွား ပုံမှာ (မ------) သည် နေအိမ်တွင် တစ်ယောက် တည်း ရှိနေစဉ် ဘေးအခန်းမှ (မောင်-----) က ရေဘားဖွင့်ပေးရန် အကူအညီတောင်း ခံခြင်းကြောင့် (မ……) သည် အခန်းအတွင်းသို့ ၀င်ပြီး ရေဘား ဖွင့်ပြီး ပြန်အ ထွက်၌ ( မောင်…….) က ကုတင်ပေါ်သို့ တွန်းလှဲကာ အတင်း အဓမ္မ ပြုကျင့်ရန် ကြံရွယ် ခဲ့ခြင်းဖြစ် သည်။
Posted by drmyochit Friday, March 01, 2013, under မြန်မာသတင်းများ | No comments
ထိုင်းနိုင် ငံတောင်ပိုင်း ပတ္တရားမြို့မှာ အလုပ်လုပ် တဲ့ မြန်မာ အလုပ် သမား ၂ ဦးကို အလုပ်ရှင်က ငွေခိုး တယ်လို့ စွပ်စွဲပြီး ရဲလက်အပ်ရာမှာ ရဲက ရိုက်နှက် ဒဏ်ကြမ်းလွန်းလို့ မခိုးပေမယ့် ၀န်ခံပေး လိုက်ရ တယ်လို့ ကာယကံရှင်က ပြောပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀ ရက်နေ့က ကုန်ပစ္စည်းတွေ လိုက်လံရောင်းချအပြီး ငွေအပ်တဲ့အခါမှာ ဘတ်ငွေ ၆ သောင်း လျော့နေတဲ့ အတွက် သူတို့ကို အလုပ် ရှင်က ရဲလက်ထဲ အပ်ခဲ့ပြီး ပတ္တရား ရဲစခန်း အချုပ်မှာ သေလုမြောပါး ရိုက်နှက် အတင်း ၀န်ခံ ခိုင်းတာလို့ အရိုက် ခံရတဲ့ ဦးကျော်သိန်းက ပြောပါတယ်။
မအူပင်မြို့နယ်အတွင်း ပုဒ်မ ၁၄၄ ထုတ်ပြန်ထားသည့် နေရာမှ ရဲအင်အား ၂၀ဝ ခန့်အား မူလနေရပ် ဌာနသို့ ပြန်လည်ပို့ဆောင်
မူလဌာနေသို့ ပြန်လည်ထွက်ခွာရန် စောင့်ဆိုင်းနေ သည့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များအား ဖောဖော်ဝါရီလ ၂၈ ရက် ညနေ ပိုင်းက တွေ့ရစဉ်
ဧရာဝတီတိုင်း ဒေသကြီး၊ မအူပင်မြို့နယ်၊ မလက် တိုကျေးရွာ အုပ်စုရှိကျေးရွာ ဒေသခံများနှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ ဝင် တို့ အကြား ပဋိပက္ခ အသွင်သည် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၈ ရက် ညနေ ၅ နာရီဝန်းကျင်တွင်
ပြေလည်မှု ရရှိခဲ့ပြီး ယင်းည ၁၀ နာရီတွင် ပလောင်ကျေး ရွာအနီး ပုဒ်မ ၁၄၄ ထုတ်ပြန်ထား သည့် နေရာ တွင် လုံခြံရေး တာဝန်ယူနေသည့် ရဲအင် အား ၂၀ဝ ခန့်အား မူလနေရပ်ဌာန သို့ ပြန်လည် ပို့ဆောင် လိုက်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း ဧရာဝတီ တိုင်း ဒေသကြီး ဒုတိယတိုင်း ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ဦးထွန်းမင်းက အတည်ပြု ပြောကြားခဲ့သည်။
မူးယစ်ရာဇာ နော်ခမ်းကို ယနေ့ ကွပ်မျက်မည်
Posted by drmyochit Friday, March 01, 2013, under သတင်းများ | No comments
မြန်မာ မူးယစ် ရာဇာ စိုင်းနော် ခမ်းနှင့် အပေါင်း အပါ သုံးဦးကို တရုတ် သင်္ဘောသား ၁၃ဦးအား သတ်ဖြတ် မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ယနေ့တွင် ဆေးထိုး ကွပ်မျက် မည်ဟု တရုတ်နိုင်ငံမှလာသော သတင်း များ အရ သိရ သည်
တရုတ်နိုင်ငံ၏ ပြည်သူ့ တရား ရုံးချုပ်က အယူခံကို ပြန်လည် စစ်ဆေးပြီးနောက် ထိုသို့ ချမှတ် လိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ နော်ခမ်းနှင့်အတူ ထိုင်နိုင် ငံသား ဆန်ခမ်း၊ လာအိုနိုင်ငံသား တျာဇီခါ နှင့် နိုင်ငံမဲ့ တဦးဖြစ်သည့် ယီလိုင်တို့လည်း သေဒဏ် စီရင် ခံရမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
Comment တွေမှာလိုက်ချနေတဲ့ Facebook Virus Warning !!!!!
Posted by drmyochit Friday, March 01, 2013, under သတင်းတို,သတင်းများ | No comments
ပုံစံကတော့ Auto သဘောမျိုး ကူးစက်ခံရသူ မသိပဲ တခြားနေရာတွေ မှာ ဗိုင်းရပ်လင့်တွေ လိုက်ချတဲ့ပုံ စံမျိုးပါ ။ စာသားကတော့အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ် ။
အဲဒီလင့်ကိုနှိပ်တဲ့အခါ video file တစ်ခုပေါ်လာမယ် Click on play to watch! ဆိုပြီး စာရေးထားတယ် ။
Video အပေါ်ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါ အဲဒီ video ဖိုင်ပျောက်သွားပြီး Verify You Are Human ဆိုပြီးပေါ် လာတယ် ။ ပြီးတော့Generate code လုပ်ခိုင်းတယ်ကိုယ့်ဖေ့ဘုတ် address bar ကို Copy paste ပြန်လုပ် ခိုင်းတယ် ။
‎"နန်းခင်ဇေယျာအား မြန်မာနိုင်ငံ ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်၏ သံတမန်ခန့်လိုက်ပြီ"
ဆုများရှင် နန်းခင်ဇေယျာအား မြန်မာနိုင်ငံ ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်၏ သံတမန် အဖြစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၈ ရက်ညနေပိုင်းက ခန့်အပ် လိုက်ပြီ ဖြစ် ကြောင်း သိရသည်။
ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်က နန်းခင်ဇေယျာအား ဆီးဂိမ်းပြိုင်ပွဲပြီးသည်အထိ သံတမန် အဖြစ် တစ်နှစ်ခန့်အပ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပြီး၊ ၄င်းအနေဖြင့် မြန်မာ အသင်း ဂျာစီအကျီဝတ်၍ ဆီးဂိမ်းတွင် ပရိသတ်နှင့် ဓာတ်ပုံရိုက်ပေးခြင်း၊ ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်များတွင်ပါဝင်ပေးခြင်းများကို အခကြေးငွေ မယူပဲ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဘောလုံး အဖွဲ့ချုပ်မှ တာဝန်ရှိသူကပြောသည်။
ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့တွင် လူ ၃၃ ဦး သေဆုံးပြီး ဟိန္ဒူနှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာကျောင်းများ မီးရှို့တိုက်ခိုက်ခံရ
မြန်မာနိုင်ငံ၏ အ်ိမ်နီးချင်း ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ နိုင်ငံမှာ မနေ့က ဂျာမတ် အစ္စလာမ် မီယာက ခေါင်းဆောင် တစ်ဦး သေဒဏ် ပေးခံ ရပြီးနောက် ဆူပူ အကြမ်းဖက် မူများ ပေါ်ပေါက်ခဲ့ရာမှာ လူပေါင်း ၃၃ ဦး သေဆုံးပြီး ဟိန္ဒူကျောင်း ၅ ကျောင်းနဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း တစ်ကျောင်းတို့ မီးရှိ့ တိုက်ခိုက်ခြင်း ခံခဲ့ရ ပါတယ်။
၁၉၇၁ ခုနှစ် လွတ်လပ်ရေး စစ်ပွဲအတွင်း ပါကိစ္စတန် စစ်တပ်နဲ့ ပေါင်းပြီး လူသားမျိုးနွယ်အပေါ် စစ်ရာဇ ၀တ်မူတွေ ကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့ စွပ်စွဲချက်နဲ့ ဖမ်းဆီး တရားစွဲခံထားရတဲ့ ဂျာမတ် အစ္စလာမ်မီယာ ပါတီက ဒုဥက္ကဌ ဒေလ၀ါ ဟူစိန် ဆာယီဒီကို ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့က ဖွဲ့စည်းပေးထားတဲ့ နိုင်ငံတကာ ရာဇ၀တ်မူ ခုံရုံးက မနေ့က သေဒဏ်ပေးခဲ့ပါတယ်။
စစ်မှန်သည့် ငြိမ်းချမ်းရေးရရန် ခေါင်းဆောင်များ လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ရုံ ညစာစားပွဲများ ကျင်းပနေရုံမျှနှင့် မလုံလောက်ဘူးဆိုသည်ကို နားလည်လက်ခံထားကြောင်း ပြည်သူသို့ ပြောကြားသည့် တတိယအကြိမ်မြောက် ရေဒီယိုမိန့်ခွန်းတွင် နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ထည့်သွင်းပြောကြား
Posted by drmyochit Friday, March 01, 2013, under မိန့်ခွန်း | No comments
၆၆ နှစ်မြောက် ပြည်ထောင်စုနေ့ အထိမ်းအမှတ် ဧည့်ခံပွဲတွင် နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့အား တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ- သမ္မတရုံး ၀က်ဘ်ဆိုက်)
စစ်မှန် သည့် ငြိမ်းချမ်းရေးရရန် ခေါင်းဆောင်များ လက်ဆွဲနှုတ် ဆက်ရုံ ညစာစားပွဲများ ကျင်းပနေရုံ မျှနှင့် မလုံလောက်ဘူး ဆိုသည်ကို နားလည် လက်ခံ ထားကြောင်းနှင့် ယင်းသို့ အစပြု တွေ့ဆုံ မှုများမှ တစ်ဆင့် ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုနှင့် ယုံကြည်မများ ရယူပြီး ရေရှည်ခိုင်မာသည့် ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက် ဖို့ အခြေခံအုတ်မြစ်များ တည်ဆောက်ရမှာ ဖြစ်သည်ဟု မတ်လ ၁ ရက် နံနက် ၇ နာရီက ပြည်သူ သို့ ပြောကြားသည့် တတိယအကြိမ်မြောက် ရေဒီယို မိန့်ခွန်းတွင် နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က ထည့်သွင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
Posted by drmyochit Friday, March 01, 2013, under စာအုပ်စင် | No comments
ဆရာ ချစ်သောလူ ရေးသားတဲ့ Android User Guide မြန်မာလိုစာအုပ်လေးပါ...စာအုပ်ထဲမှာ ဖုန်းအမျိုးအစာ ပေါင်း များ စွာအတွက် Root လုပ်နည်းလိုမျိုး.. အကြောင်းအရာတွေအပြင် အခြားဗဟုသုတ များစွာ ကိုရေး သားထားပါတယ်...Android
ဖုန်းသမား များအတွက်ကတော့ တကယ့်ကို အဖိုး တန်တဲ့ စာအုပ်ကောင်းလေး တစ်အုပ် ပါ..စာမေး ပွဲဖြေနေချိန် မှာတောင် အများ အကျိုး အတွက် ဒီစာအုပ်လေးကို ပို့ပေးခဲ့တဲ့ အစ်ကိုဖြိုးဝေအောင်ကို လည်း ဒီကနေတစ်ဆင့် လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ကျေးဇူးတင်ရှိ ပါတယ်ခင်မျာ...ဂုဏ်ထူးတွေ တစ်သီတစ်တန်းနဲ့ အောင်မြင် မှုပန်းတိုင် ကို ရောက်ရှိ ပါစေ ခင်မျာ...ကဲ....စာရှုသူ ပရိတ်သတ် အပေါင်း...ဒေါင်းနိုင် ပါပြီခင်ဗျားးး :)
Posted by drmyochit Friday, March 01, 2013, under ပြည်တွင်းသတင်းများ | 1 comment
ထိုသို့ ဆောက်လုပ်ပေးခြင်းသည် ရခိုင့်မြေပေါ်တွင် ဘင်္ဂလီများအင်အားပို လာအောင် လုပ်ပေးခြင်းဖြစ် သည့်အပြင် ၈၂ ဥပဒေအတိုင်းစစ်ဆေးပြီးမှ သာ အိမ်နှင့်ထားသင့်သူများကို ထားပြီး အိမ်နှင့်မထား သင့်သူ များ ကို တန်း လျားဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ အခြားသင့်တော်သောနေရာများတွင် သော် လည်းကောင်း ထားခွင့်ပေး မည်ဖြစ်သည်။
သို့သော်လည်း တူရကီ၏ ယခုလုပ်ရပ်များသည် မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရကို သိက္ခာချနေသကဲ့သို့ဖြစ်နေပြီ သူတို့ လက်နှင့် သူတို့ လာရောက်အိမ်ဆောက် မည်ဆိုသည်မှာ ရခိုင်ပြည်နယ်အား တူရကီ နိုင်ငံ အဖြစ်ပြောင်း လဲသတ်မှတ်လိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။
ကသာရဲစခန်းမှ ရဲအုပ်တစ်ဦး တာဝန်ထမ်းဆောင်နေစဉ် ဓါးထိုးခံရ
၂၈၊၂၊၂၀၁၃ရက်နေ့ နေ့လည် ၁၁နာရီ ၃၀မိနစ် ခန့်က ကသာမြို့ရဲစခန်းတွင် တာဝန်မှူး တာဝန် ထမ်း ဆောင် နေသော ရဲအုပ်မျိုးမြင့်သိန်းဆိုသည့် ရဲအရာ ရှိ တစ်ဦး တာဝန် ထမ်းဆောင်နေ စဉ်အ တွင်း တရား ခံမှ ဓါးဖြင့်ထိုးခဲ့သဖြင့်
ယခု အချိန်တွင် ကသာခရိုင်ပြည် သူ့ဆေးရုံကြီး ခွဲစိပ်ခန်း တွင် အရေးပေါ် ခွဲစိပ် ကုသမှု ခံယူနေ ရကြောင်း သိရှိ ရပါသည်၊အသက် အန္တရာယ် ထိခိုက်နိုင် ရှိမရှိနှင့် ဒါဏ်ယာပြင်း ထန်မှု အခြေ အနေ ကို မသိ ရသေးကြောင်း သတင်း ရရှိပါသည်၊
မိုဘိုင်းဖုန်းများကို လာမည့်ဧပြီလအတွင်း သက်သာသည့်ဈေးနှုန်းဖြင့် ရောင်းချပေးနိုင်ရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်လျက် ရှိကြောင်း နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးဦးသိန်းစိန်၏ ရေဒီယိုမိန့်ခွန်းတွင် ထည့်သွင်း ပြောကြား
ဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနဲ့ ပတ်သက် လို့လည်း မိမိတို့အစိုးရအဖွဲ့ တာဝန်ယူချိန် ကစပြီး နည်း လမ်း မျိုးစုံနဲ့ ကြိုးပမ်းဆောင် ရွက်နေ တာကို မိဘ ပြည်သူများ သိရှိကြပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
မကြာခင် ကာလမှာ လက်ရှိ ဆက်သွယ်ရေး အခြေခံ အဆောက်အအုံများကို အခြေခံပြီး တိုးချဲ့ပေးနိုင်မယ့် မိုလ်ဘိုင်း ဖုန်းအရေအတွက်ကို သက်သာတဲ့ ဈေးနှုန်းတစ်ရပ်နဲ့ လာမည့် ဧပြီလအတွင်းမှာ ရောင်းချ ပေးနိုင် အောင် စီစဉ် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါတယ်။
မအူပင် ရဲအကြမ်းဖက်မှု ကင်တာနား တုန်လှုပ်
မအူပင်မြို့နယ် မလက်တို ကျေးရွာမှာ လယ် သမားတွေ နဲ့ ရဲလုံခြုံရေးတွေ အကြား ပဋိပက္ခ အတွင်း အာဏာ ပိုင်တွေ ဖက်က ကိုင်တွယ်ခဲ့တဲ့ ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်လို့ မြန်မာ အစိုးရအနေနဲ့ တာဝန် ယူ ဖြေရှင်းဖို့ မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့် အရေး ကိုယ်စားလှယ် သောမတ် အိုဟေး ကင်တာနားက တောင်းဆို လိုက်ပါ တယ်။ ဒီ ကိုင်တွယ်ဖြေ ရှင်းရာ မှာ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဖက်က အမျိုးသမီးတွေကို အကြမ်းဖက်ရိုက်နှက်ခဲ့တဲ့ မှတ် တမ်းတွေ ကို မြင်ရတော့ သူ့အနေနဲ့ အလွန်ပဲ ထိတ်လန့်တုန့်လှုပ်ရတယ်လို့ မစ္စတာကင်တာနားက ပြောပါ
ကင်တာ့ကီ၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၈
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ကင်တာ့ကီပြည်နယ်ရှိ လူးဝစ်ဗီးလ်တက္ကသိုလ်မှ ကျောင်းသားတစ်ဦးကို ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းလိုက်သည့် ဖြစ်ရပ်တစ်ခု ယမန်နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ဖြစ်စဉ်မှာ တယ်ရီ ဒေးဗစ် ဆိုသူ ကျောင်းသား တစ်ဦးသည် အရောင်းဆိုင် တစ်ခုတွင် စာအုပ် တစ်အုပ်ကို ခိုးယူပြီးနောက်၊ ထိုစာ အုပ်ကို ဂရေး ကောလိပ်ရှိ စာအုပ် အရောင်း ဆိုင်တွင် ပြန်လည်ရောင်း ချခဲ့သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ တယ်ရီ စာအုပ်ခိုးသည့် ဖြစ်စဉ်ကို အရောင်းဆိုင် ဗီဒီယို ကင်မရာမှ မှတ်တမ်းတင်ထားသဖြင့် အစအ ဆုံးပြန်လည် စစ်ဆေးတွေ့
ရခိုင်တွင် ဓာတ်သတ္တု စမ်းသပ် တူးဖော်ခွင့် တရုတ်ကုမ္ပဏီ ရရှိ
ရသေ့တောင်မြို့ (ဓာတ်ပုံ – alodawpyei.org)
ရခိုင်ပြည်နယ် ရသေ့တောင်နှင့် မောင်တော ဒေသတို့ရှိ ပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်း တလျှောက်၌ အလူမီ နီယမ်နှင့် တိုက်တေနီယမ် ဓာတ် သတ္တု များကို တရုတ်ကုမ္ပဏီတခုက ထုတ်လုပ်ဝယ်ယူခွင့် ရရှိ သွားကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
တရုတ်နိုင်ငံမှ ရွှေရှာဖွေရေး အမည်ရှိ “Gold Finder” ကုမ္ပဏီသည် ပြီးခဲ့သည့်ရက် အနည်းငယ်က ရသေ့တောင် ဒေသသို့ ရောက်ရှိနေပြီ ဖြစ်ကြောင်း၊ တူးဖော်စမ်းသပ်မည့် ကိစ္စများကို ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း စတင်လုပ်ဆောင်မည်ဟု သိရကြောင်း ရသေ့တောင်ဒေသခံ ဦးကိုကိုမောင်က ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
စာတမ်း ရေးသားပြုစုသူ ယန်ဆန်းသည် ဘေကျင်းတွင် ၂၀၀၈ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၁ ခုနှစ် အထိ အခြေစိုက် နေထိုင်ခဲ့ပြီး International Crisis Group ၏ တရုတ်အရေး လေ့လာသူ တစ်ဦးအဖြစ် ဆောင်ရွက် ခဲ့သည်။
ဤစာတမ်းသည် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု Brookings Institution ရှိ အနောက်မြောက် အာရှ မူဝါဒ လေ့လာရေး ဗဟိုဌာန၌ Visiting Fellow အဖြစ် ထမ်းဆောင်ခဲ့စဉ် အပြီးသတ် ရေးသားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ သူမ၏ သုတေသန ကျမ်းမှာ တရုတ်နိုင်ငံ၏ နိုင်ငံခြားရေး မူဝါဒ၊ အထူးသဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးဆဲ နိုင်ငံများ၊ ဗဟိုဦးစီးစနစ် အုပ်ချုပ်ရေး နိုင်ငံများနှင့် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ဆက်ဆံရေးကို အလေးပေး ပြုစုခဲ့သည်။ ဤစာတမ်းတွင် တရုတ်-မြန်မာ ဆက်ဆံရေး အလှည့် အပြောင်းများ၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းရေး လမ်းစဉ်အပေါ် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ခန့်မှန်းချက် အလွဲများ၊ အနာဂတ် အလားအလာများ အကြောင်းကို ရေးသား ပြုစုထားသည်။
အသက်မပြည့်အမျိုးသမီးငယ်အား အဓမ္မပြုကျင့်ရန် ကြံစည်မ...
ငွေပျောက်မှုကြောင့် မြန်မာအလုပ်သမားကို ထိုင်းရဲစခန်...
မအူပင်မြို့နယ်အတွင်း ပုဒ်မ ၁၄၄ ထုတ်ပြန်ထားသည့် နေရ...
Comment တွေမှာလိုက်ချနေတဲ့ Facebook Virus Warning ...
‎"နန်းခင်ဇေယျာအား မြန်မာနိုင်ငံ ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်၏...
ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့တွင် လူ ၃၃ ဦး သေဆုံးပြီး ဟိန္ဒူနှင့် ဗုဒ...
စစ်မှန်သည့် ငြိမ်းချမ်းရေးရရန် ခေါင်းဆောင်များ လက်...
ကသာရဲစခန်းမှ ရဲအုပ်တစ်ဦး တာဝန်ထမ်းဆောင်နေစဉ် ဓါးထိ...
မိုဘိုင်းဖုန်းများကို လာမည့်ဧပြီလအတွင်း သက်သာသည့်ေ...
ရခိုင်တွင် ဓာတ်သတ္တု စမ်းသပ် တူးဖော်ခွင့် တရုတ်ကုမ္ပ...